[UKUZIMELA] NGABA IPOSI IHANJISIWE NAMHLANJE NGE-5 KAJULAYI KA-2021? NGABA IIPOSI ZIVULIWE? - IINDABA
[Ukuzimela] Ngaba iposi ihanjisiwe namhlanje nge-5 kaJulayi ka-2021? Ngaba iiPosi zivuliwe?
Ngaba iposi ithunyelwe ngoMvulo, nge-5 kaJulayi, kulo mhla wethu? Ngaba i-USPS ibeka indawo yokusebenzela evulekileyo kusuku olulandelayo emva kwe-4 kaJulayi ngeholide? Njengakwiholide ezininzi zomdibaniso, iinkampani ezimbalwa kunye nababoneleli bavaliwe kwiSikhumbuzo soMhla. Oku kubandakanya unikezelo lweposi yase-U.S. Kunye nokunikezelwa kwabanikezeli ngeimeyile ezahlukeneyo.
Iposi ayizukuhanjiswa nanamhlanje
I-USPS ayizukuvulwa kwaye i-US Postal Service ayizukuhambisa ngeposi endlwini yakho ngalo mhla, ngaphandle kwento yokuba iholide esemthethweni yomanyano ngomhla we-4 kaJulayi yayizolo. Oku kuthetha ukuba indawo yokuposa inokuvalwa nakule mihla kwaye awuyi kufumana imeyile ngalo mhla.
Ngokweshedyuli yeholide ye-USPS, inkonzo yeposi ivaliwe ngoSuku loNyaka oMtsha, uMhla wokuzalwa kaMartin Luther King Jr., usuku lokuzalwa lukaWashington (uqaphele), uSuku lweSikhumbuzo, uSuku lweNkululeko, uSuku lwaBasebenzi, uSuku lweColumbus, uSuku lwamaVeterans, uSuku lokuBonga, kunye Usuku lweKrisimesi.
Ezi nyanga zili-12, ngenxa yomhla wesine kaJulayi ewela ngeCawa, iholide iyaqatshelwa kulusuku lwanamhlanje ngoMvulo, nge-5 kaJulayi. usuku.
Indawo yewebhu ye-USPS ithi: Nge-4 kaJulayi 2021 (iholide kawonke-wonke egunyazisiweyo yoSuku lweNkululeko), iwela ngeCawa. Uninzi lwabasebenzi baseburhulumenteni, ngoMvulo, nge-5 kaJulayi, inokuphathwa njengeholide yokuhlawula kunye nokuhamba nemisebenzi.
Ukuhanjiswa kweposi rhoqo kuya kuqhubeka ngoLwesibini, nge-6 kaJulayi.
Nangona kunjalo ungaya kwii-kiosks zokuzenzela iinkonzo, kwiindawo ezinokuposwa, ezinokuthi zivuleke kule mihla ikhoyo nangona kungekho mntu unokuphangela. Locatoronline.com. Kwimenyu eyehlayo, khetha iiKia zokuziSebenzela phantsi kohlobo lwendawo. Emva koko gcwalisa i-metropolis yakho kunye ne-state okanye i-ZIP code. Emva koko khetha ukuba ufuna kangakanani ukuhamba ngaphantsi kweklasi, kwaye ucofe kuKhangelo.
IUPS kunye neFedEx kwakhona ziqwalasele namhlanje iholide yokuhambisa
I-UPS kunye neFedEx ngokungezelelweyo bacinga malunga nomhla wangoku njengeholide yezothutho.
Ngokweshedyuli yeholide yeFedEx, inkonzo nganye ivaliwe ngaphandle kweFedEx Custom Critical. I-FedEx Express, iFedEx Ground, ukuhanjiswa kweKhaya kweFedEx, iFedEx SensiblePost, iFedEx Trade Networks, kunye neFedEx Freight zonke zivaliwe namhlanje.Ngokutsho kweFedEx, ukuCwangciswa okuCwangcisiweyo kulusuku olunye kwaye kunikezelo losuku olunye lwezothutho olukhawulezileyo.
Iindawo zeFedEx zeOfisi zinokuthi zibe neeyure eziguqulweyo ngalo mhla, kungafuneka unike igama umthengisi wakho wendalo ukuze ubone ukuba ivulekile okanye akunjalo.
I-UPS ijonga uSuku lwe-Independence ngalo mhla, nangona iindawo zokugcina i-UPS zivulekile, kwaye akusayi kubakho nkonzo okanye inkonzo yokubonelela ngalo mhla. I-UPS Express Inkonzo ebalulekileyo ihlala ikhona.
Uluhlu lwe-UPS luluhlu lwayo lweholide kanye apha. Iiholide ze-UPS indawo yothutho ivaliwe iquka uSuku loNyaka oMtsha, uSuku lweValentine (ngenxa yoko yawa ngeCawa), i-Ista, uSuku looMama (iwela ngeCawa), uSuku lweSikhumbuzo, uSuku lokuZimela, uSuku lwaBasebenzi, uSuku lokuBonga, kunye Usuku lweKrisimesi.
Ukuba unemibuzo malunga nonikezelo lweposi yeAmazon, yinto encinci ethe kratya. Ngokwesiqhelo, ngenxa ye-UPS, i-FedEx, kunye nababoneleli ngeenkonzo ze-USPS bavaliwe, iAmazon yongezwa ineholide yezothutho. Kodwa oku akuqinisekiswanga maxa onke, kuxhomekeka kwindlela ekuthengiswa ngayo ukuthengiswa.
Izigaba: Inetflix Iwiki Iindaba
Ngaba iintsuku ezingama-60 kubathathi-nxaxheba ziyahlawulwa
ukufaka isicelo sokuba ulixhoba
Ixesha elincinci le-5 kwi-hulu
Imfazwe yehlabathi z 2 irhoxisiwe
ngubani utata katata ka-rory
I-12 imihla yekrisimesi hbo umbalisi
yafikelwa nini ikrisimesi elula yokulwa